Suko Ptfe Paste Extruder Ntụziaka - SuKo Polymer Machine Tech Co., Ltd.
PTFE na-akpọkarị teflon, plastic king. PTFE tapawa extruder, ọ bụ a igwe akpan mere nke ptfe akpa. A na-akpọkarị tube ahụ okpu, uwe ma ọ bụ eriri. Ngwaọrụ site na mmalite nke ihe akụrụngwa na sieve powder, agwakọta, ịka nká, billet, extrusion, winding, jụrụ oyi, bepụ usoro a zuru oke, mepụta ọtụtụ sooks ngwaahịa iji mezuo ihe ndị a chọrọ. Isiokwu iji, nkọwapụta, ihe eji arụ ọrụ, ihe ndị ọrụ chọrọ na ihe ndị ọzọ metụtara ya, ugbu a, nwere ike chepụta ma mepụta nkọwa dị iche iche nke igwe PTFE paste extruder. Usoro teflon o mepụtara nwere ike iji ya mee ihe na ụlọ ọrụ ndị agha, ụlọ ọrụ kemịkal, ọgwụgwọ ahụike, aerospace, akụrụngwa akụrụngwa, mgbanwe okpomọkụ na mpaghara ndị ọzọ.
Dabere na ihe ndị ahịa chọrọ maka atụmatụ dị iche iche, enwere ọgụgụ isi ma dị mfe. A na-eme ụdị dị mfe dịka mkpa nke ụfọdụ ụlọ ọrụ naanị, nke a na-ejikarị maka ule, njikwa njikwa ntuziaka, ọnụahịa akụrụngwa dị ala, dabara maka obere ogbe mmepụta. Ọgụgụ ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi site na PLC, nhazi ihuenyo mmetụ, mmezi akpaka nke ọsọ ọsọ, njikwa okpomọkụ, njikwa njiko ọkụ extrusion.
SUKO PTFE igwe Tech CO., LTD ọkachamara na mmepe, mmepụta na ire nke ngwa fluoroplastic, na ọtụtụ afọ nke ahụmahụ n'ọhịa nke ngwa tetrafluoride, akụrụngwa anyị ejirila ahịa mba ụwa rụọ ọrụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba na mpaghara 40. Ndị ahịa anyị na-etinye aka na ụlọ ọrụ ahụike, ụlọ ọrụ aerospace, ụlọ ọrụ ndị agha, ụlọ ọrụ kemịkalụ, ụlọ ọrụ ụgbọ ala na igwe dị iche iche, pipeline na akụkụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ.
Uru Uru: Innovation, teknụzụ, arụmọrụ na ọgụgụ isi.
Ozi: imepụta ụdị tetrafluoride nke ụwa mbụ.
1. Atụmatụ nke PTFE PASTE EXTRUDER
Tapawa extrusion nke nkọwa dị iche iche nke ihe ọkụkụ tetrafluoride achụsasị;
Vetikal nwụnye ewepu, nwere ike wepu 2-15 mita kwa nkeji;
Extrusion ogologo nwere ike ahaziri dị ka chọrọ;
Ọgụgụ isi nke akụrụngwa, ọrụ siri ike;
Mmezi bụ adaba, nnyefe bụ mgbanwe, Ọdịdị dị mfe iji wụnye;
SUKO na-enye akụrụngwa zuru oke, akụrụngwa inyeaka na ngwa ọrụ aka;
SUKO na-enye usoro nhazi ọrụ nhazi;
Multi-oyi akwa ihe tube nwere ike extruded;
2. AKWUKWỌ AKW OPKWỌ AKW ENKWỌ AKW ENKWỌ AKW .KWỌ
Achọrọ ala atọ iji wụnye akụrụngwa, rụọ ọrụ na ala nke atọ, mee ka oghere ọrụ ahụ dị ọcha, ekwela ka ájá dị n'ime. Ime ụlọ nkwadebe ihe eji eme ihe, nke ejiri ngwakọta na ihe mgbakwunye, na-agwọ ihe ndị ahụ. na sintering oven, igwekota na electric sieve.A haịdrọlik ojii na-etinye na nke abụọ nke ụlọ dị ka a mmezi platform.First n'ala anwụrụ extrusion, asọfe okokụre ngwaahịa.
Maka nnukwu tubes na dayameta elu karịa 50mm, ọ dị mkpa ka a kpochaa ya site na elu ala, ọkwa ọrụ a dị ihe dịka mita 8-10 dị elu dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị;
Maka ọkpọkọ nwere mpempe elu na-erughị 40mm, ogologo dum dị ihe dịka mita 13-15;
Anyị nwere ike ịhazi akụrụngwa ahụ dịka nha ala nke ndị ahịa ahụ.
Dabere na njirimara ngwaahịa ahụ, iji hụ na njirimara anụ ahụ nke tube tetrafluoride extruded, ugbu a ọpụpụ nke mba ụwa, enweghị extrusion kwụ ọtọ.
N'okpuru ọnọdụ nkịtị, ibu eburu ibu ga-adị site na 500 n'arọ ruo ihe dị ka otu ton, na mkpokọta ịdị arọ nke akụrụngwa ahụ bụ ihe dị ka tọn abụọ.
Igwe na-eme oghere na-ekpuchi ebe dị ihe dị ka square mita 1, na onye na-emepụta ihe na-ekpuchi ebe dị ihe dị ka square square 1.5.
Electricitykpụrụ ọkụ eletrik arụ ọrụ: 380V, 50Hz, 3P, a ga-ahazi voltaji dịka ọchịchọ onye ọrụ.
Ngwaọrụ ndị dị mfe kwesịrị ka enwee ikuku ikuku.
3. AKW GKWỌ AKW GKWỌ AKW .KWỌ
Main Nka na ụzụ nkọwa
Mbanụ. Ihe Nka na ụzụ
Extruder PTFE tube nso:
1 Out dayameta nso 0.5mm - 70mm
2 Mgbidi mgbidi dị elu 0.1mm - 3mm
Main Extruder igwe
1 Ike 3 KW-10 KW
2 Sịlịnda dayameta 20mm-300mm
3 ibu ogologo oghere 400mm - 2000mm
4 Ruddị Extruder Vetikal Ala ma ọ bụ elu
5 Pịa ụdị Hydraulic
6 Voltaji 380V 3P 50Hz
1 Ike 1KW -10KW
3 Oghere dị elu 400mm - 2000mm
4 Pịa ụdị Hydraulic
5 Ruddị Extruder Vetikal elu
1 Ike 2-10 kw
2 Mpaghara Sintering 3
3 Elu 8000-9000mm
4 Okpomọkụ Ngo 500
5 Voltaji 380V 3P 50Hz
1 Ogwe njikwa Usoro ihuenyo mmetụ njikwa usoro
Cheta na: Paste Extruder e mere site dị iche iche extruder akara dị kpọmkwem tube size nso.
4. AKWSTKWỌ AKWSTKWỌ AKWQKWỌ AKWQKWỌ
5. EGO EGO N’ọrụ
Lelee ma ike-na voltaji na ike nke akụrụngwa na-agbanwe agbanwe, na njikọ njikọ kwekọrọ na eserese wiring.
Lelee ọnọdụ mmanụ hydraulic, lelee njikọ pipeline hydraulic bụ eziokwu. Kwenye mkpakọ ikuku njikọ
Lelee ma ebu arụnyere n'ụzọ ziri ezi ma gosi na akwụkwọ ntuziaka ọrụ na debugging
Ike na, site na usoro PLC iji tọọ nrụgide, ọnọdụ okpomọkụ nke mpaghara ọ bụla, na-ejide oge, ọsọ extrusion na akụkụ ndị ọzọ
Tinye ebe teflon a kwadebere n'ime onye na-eme ihe nkiri
Guzo ma malite igwe
Nyefee ma ọ bụ belata tetrafluoride tube dị n'ime ogologo ogologo.
Mgbe ojiji, gbanyụọ igwe ma hichaa ebu.
6. AKW ANDKWỌ NA NCH MR M AHOLD
Na-enyocha ịdị elu, ịdị ọcha na okpomọkụ nke mmanụ dị ọcha mgbe niile
A na-atụ aro ka ị dochie mmanụ hydraulic kwa ọnwa isii
Dochie akàrà ma ọ bụrụ na ha eyi
Ekwesịrị ịkpụzi ebu ahụ ma debe ya n'oge, ma kwesiri iji mkpuchi dị mkpa nke mmanụ nchekwa kpuchie elu ahụ
Jikwaa ihe mmetụta mgbanaka ọkụ dị ọkụ nwayọ ma chekwaa ya nke ọma
7. NKWA NKE AKWAREKWỌ AKWAREKWỌ NA AKW ACKWỌ
A na-ezigara ndị ahịa akụkụ ndị dị mkpa nke ngwa ahụ yana akụrụngwa ahụ
E zigara onye ọrụ yana ndepụta nke isi akụkụ nke akụrụngwa na akụrụngwa
Mgbe ndị ahịa zụrụ akụrụngwa anyị, Na mgbakwunye na ngwa ndị dị mkpa, anyị ga-enye akụkụ ndị dị mkpa maka ndị ọrụ iji dochie anya, na-arụ ọrụ nrụnye, akụkụ ndị ọzọ bụ akụkụ ọkọlọtọ ma nwee ike zụta na ahịa mpaghara
8. NTECKWU TLỌ ỌR T AKW TKWỌ
N'ihi na teknụzụ pụrụ iche nke akụrụngwa ahụ, ịnwere ike ịga ụlọ ọrụ mmepụta ihe iji mụta ntinye, nbugharị, ọrụ, ngbanwe ebu, ndozi na nhazi usoro nke akụrụngwa n'efu tupu nnyefe.
Ọ bụrụ na ebe dị anya, ndị ọrụ, oge na ihe ndị ọzọ na-adịghị mma na-emetụta, anyị enweghị ike ịbịakwute ụlọ ọrụ anyị iji mụta, anyị nwere ike n'akụkụ nke ọzọ kwetara ịhazi ndị injinia ịbịa iji duzie akụrụngwa akụrụngwa, mbibi, ọrụ, mgbanwe ebu, mmezi, usoro nduzi
Anyị nwekwara ike inye nduzi dịpụrụ adịpụ, ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ ụzọ ndị ọzọ dị ka ekwentị, vidiyo, ozi iji mụta nrụnye akụrụngwa, nbipu, ọrụ, ịkpụzi ebu, ndozi, usoro nhazi, wdg.
9. BANYERE MGBE-Ahịa AKA
Oge ikike nke akụkụ niile na igwe isi bụ otu afọ site na ụbọchị ire ere
Ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla, kpọtụrụ ndị ọrụ na-ahụ maka ndị ahịa iji kọwaa nsogbu ahụ n'oge. Ndị ọrụ anyị na-ahụ maka ọrụ ga-agbaso ma dozie nsogbu ahụ n’ime awa 24.
Ọ bụrụ na onye ahịa ahụ nwere onye na-ekesa mpaghara nke ụlọ ọrụ anyị, anyị ga-akwado ndị na-ere ahịa mpaghara iji dozie nsogbu ahụ.
Ọ bụrụ na ndị ahịa chọrọ ngwa ngwa, ụlọ ọrụ anyị ga-enye nkwado teknụzụ vidiyo na oge
MGBE AH SRAL ERLỌ TLỌ TEL ： + 86-0519-83999079 / +8619975113419
10. ỌZỌ AKW OKWỌ AKW OKWỌ AKWPTKWỌ
1 Egwuregwu eletrik Igbasa ntụ ntụ tupu agwakọta
2 Igwekota Iji mixxing ntụ ntụ na Liquid mmanu
3 Sintering Ọkụ Iji sintering ntụ ntụ na mmiri mmiri mmanu
4 Ebibi Iji wepu electrostatic si tube mgbe extruder tupu sintering
5 Igwe ikuku Akpaka wring tube
6 Igwe corrugated Iji mee tube tube OD 8-50mm
7 Maka akụrụngwa tetrafluoride ndị ọzọ, biko kpọtụrụ ụlọ ọrụ anyị maka ịgba izu